Shacabka Muqdisho oo ka niyad jabay Maamulka Gudoomiye Yariisow – XAMAR POST
Shacabka Magaalada Muqdisho, ayaa ka niyad jabay maamulka Gobolka Banaadir, kadib markii ay kordheen falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka ee ka dhacaya Magaalada Muqdisho gudaheeda.
Habeenadii la soo dhaafay Muqdisho gudaheeda waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo loo gaystay askar iyo dad shacab ah, guryaha qaar ee ay degan yihiin Saraakiil ciidan, ayaa si toos ah loo weeraray taasi oo muujinaysa korarka falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka ee caasimadda ka dhacay.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaanan badanaa ka hadlin falalka lidiga ku ah amniga caasimadda, iyadoo masuuliyiinta Gobolka Banaadir ay ku mashquulsan yihiin hawlo ka baxsan tan Gobolka, waxayna taasi rajo xumo ku riday Bulshada Gobolka Banaadir.
Dadka reer Muqdisho, ayaa marka aad la sheekaysatid waxa ay ku sheegayaan inay tabeen Maamulkii hore ee Duqii Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed, maadaama ay sheegeen in masuuliyiintii hore ay ahaayeen kuwa si wayn uga war haayay qaybaha kala duwan ee Bulshada.
Ka sokoow dilalka qorsheysan ee ay gaystaan Ururka Al Shabaab waxaa jirta falal kale oo lidi ku ah dhanka ammaanka oo ka dhaca Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Maalin ka hor nawaaxiga Isgoyska Taleex guri ku yaal, ayaa waxaa galay ciidan watay dareeska ciidamada dowladda, waxayna halkaasi ka dhaceen wixii moobeel ah oo gurigaasi laga isticmaalaayay, sida ay xaqiijisay gabar ka mid ah dadkii ciidanka ay dhaceen.
Gudoomiye Yariisoow iyo masuuliyiinta kale ee la shaqeysa ayaanan la hayn qorshe ku aadan suggida ammaanka shacabka Magaalada, taasi oo keentay in dadka ay ka niyad jabaan maamul xumada ka jirta Gobolka Banaadir.
Gudoomiye Yariisow, Wasiiro iyo Saraakiil ciidan ayaa shalay tagay Xaafadda Sos ee Degmada Heliwaa, halkaasi oo dadkii joogay ay Sawiro kula soo galeen, tani waxa ay sahlaysa in dadka la kulmay masuuliyiintaan si fudud Shabaab ku beegsadaan, maadaama amnigooda aysan damaanad qaadi karin Maamulka Gobolka Banaadir.
Isbedel la’aanta dhanka ammaanka ee ka jirta Muqdisho ayaa dadka falanqeeya arrimaha amniga ku sheegayaan sababteeda, qorshe xumiadda haysata masuuliyiinta Gobolka Banaadir.